HomeWararka CiyaarahaReal Madrid oo Dusan Vlahovic u aragta badalka Erling Braut Haaland
January 17, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Italy, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga 0
Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa in ay u dhaqaaqi karto xiddiga kooxda Fiorentina ee Dusan Vlahovic hadii ay ku fashilmaan isku daygii ay ku doonayeen in ay Erling Braut Haaland kaga soo qaataan Borussia Dortmund xagaagan.
Haaland ayaa la filayaa inuu ka tago BVB ka hor ololaha 2022-23 markaas oo 63 milyan ginni lagu burburin karo qandaraaskiisa, Real Madrid ayaana la rumeysan yahay inay hogaamineyso tartanka loogu jiro xiddiga heerka caalami ee dalka Norway.
Si kastaba ha ahaatee, Manchester City ayaa sidoo kale loo maleynayaa inay meel wanaagsan ka heli karto saxiixa 21 jirkaan, sida laga soo xigtay El Nacional , Los Blancos ayaa u calaamadsatay Vlahovic bedelka Norwey.
Vlahovic ayaa galay 18-kii bilood ee ugu dambeeyay qandaraaskiisa Fiorentina, waxaana uu diidan yahay inuu saxiixo heshiis kordhin, sidaas darteed waxaa la filayaa inuu ka tago kooxda reer Talyaani sanadkan.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Serbia ayaa dhaliyay 19 gool 23 kulan oo uu u saftay Fiorentina xilli ciyaareedka 2021-22, oo ay ku jiraan 16 gool 20 kulan oo uu saftay Serie A.